Captain America သရုပ်ဆောင်အဖြစ်မှ မင်းသား ခရစ်အီဗန် မကြာမီနုတ်ထွက်မည် - Yangon Media Group
မင်းသား ခရစ်အီဗန်သည် လာမည့်နှစ်တွင်ရုံတင်မည့် ‘Avengers 4’ ရုပ်ရှင်ပြီးနောက် Captain America အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မှုမှ နုတ်ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောကြားလိုက်ပြီး ယင်းသရုပ်ဆောင်အဖြစ်မှ ဖယ်ရှားမခံရခင် ကြိုတင်နုတ်ထွက်လိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ အသက် (၃၆)နှစ်အရွယ် မင်းသားအီဗန်သည် မကြာမီရုံတင်တော့မည့် ‘Avengers: Infinity War’ ရုပ်ရှင်နှင့် လာမည့်နှစ်တွင် ရုံတင်မည့် စတုတ္ထမြောက်ရုပ်ရှင်တို့တွင် Captain America အဖြစ် ပါဝင်ထားသည့်အကြောင်း New York Times သတင်းစာနှင့် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းက ”သူတို့ကန်မချခင် ရထားပေါ်ကနေ ဆင်းရပါမယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မင်းသားအီဗန်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် Marvel ရုပ်ရှင်နှစ်ကားတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အနီ၊ အဖြူ နှင့် အပြာရောင် စူပါဟီးရိုးဝတ်စုံကို လာမည့်ဆောင်းဦးကာလတွင် နောက်ဆုံးဝတ်ဆင်ကာ ရိုက် ကူးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ‘Avengers’ ရုပ်ရှင်များတွင် Iron Man အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် မင်းသား ရောဘတ်ဒေါင်းနင်းဂျူနီယာက မင်းသား အီဗန်အနေဖြင့် ဇာတ်ရုပ်ကို လက်လွှတ်မည်ဆိုပါက တစ်ခုခုဆုံးရှုံးရသကဲ့သို့ ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့ပြီးနောက် မင်းသားအီဗန်၏ မှတ်ချက်စကား ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းသားရောဘတ်က ”ကင်မရာရှေ့မှာ အီဗန်နဲ့အတူရှိရတာဟာ တစ်ခုခုပဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ သူသာကပ္ပတိန်အဖြစ် ဆက်မလုပ်တော့ရင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်မိမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ ခရစ်က ကျွန်တော့်ကို သူထွက်တော့မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါဆို ငါက ဘယ်သူနဲ့ ညစာစားရမှာလဲလို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မင်းသားအီဗန်ကလည်း Iron Man အဖြစ် မင်းသားရောဘတ်မှလွဲ၍ မည်သည့်မင်းသားကမှ သရုပ်မဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
ကချင်နှင့် ရခိုင် စစ်ရှောင် စခန်းများသို့ ကူညီရန် ကြက်ခြေနီ ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် ပြ?
ဖမ်းဆီးမှုကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်၍ ထိုင်းရောက်မြန်မာ များ CI စာအုပ်အချိန်မီပြ??